Sygic GPS Navigation Crack Latest Full Version Free
Eto ianao: Home / Drivers / Sygic GPS Navigation & Maps Latest Version vaky
Sygic GPS Navigation & Maps Latest Version vaky
Sygic GPS Navigation & Maps no be mpampiasa Offline GPS izay manome anao ny lalana ny tsirairay jorony ny eny an-dalana sy mampiseho lalana ho anareo tsirairay avy ny hifandimby. Ity kosa indray-by-Sygic GPS Navigation Crack fampiharana no mivoatra manokana ho an'ny Android mpampiasa amin'ny TomTom Maps. Tsy tokony hitaky izay aterineto raha fikarohana satria ny Maps sy Navigation dia napetraka eo amin'ny karatra SD. Noho izany, dia afaka manana GPS maimaim-poana, Fikarohana, Offline TomTom Maps, lalana planning, Pois sy ny sari-fanavaozam-baovao. Azonao atao mihitsy aza hanatsarana ny Premium, ary handray soa faran'izay betsaka ny Fikarohana sy ny entana ny endri-javatra toy ny fotoana tena-miverena-by-indray feon-tarihin'ny Fikarohana, 3D sarintany, sy ny tari-dalana ho an'ny hafainganam-pandeha Lane fetra fampitandremana.
Ity fampiharana Android dia manome anao intuitive Fikarohana feo amin'ny fiteny samihafa mba tsy hiampita arabe misy izay te-hibebaka
koa, manana kalitao avo TomTom sarintany voatahiry ny fitaovana izay mampiseho ny fomba an-tanàna tsirairay ny toerana halehanao. Izany koa Fikarohana tsy ilaina ny mifamadika eo amin'ny firenena, na amin'ny tsy antsipirihany sarintany sy miampita sisintany tambazotra.
Ny fampiharana miasa amin'ny GPS ihany; tsy mila mahazo ny aterineto araka ny afaka miasa ivelan'ny aterineto.
Misy an-tapitrisany maimaim-poana mialoha ary koa nametraka ambaratongan-tombontsoa avy amin'ny Head-up Display (Houd). Tsy manana 3D Landscape sy tanàna koa ho an'ny fironana mora
Sygic GPS Navigation Crack dia manome ihany koa ny mpampiasa ny mpandeha an-tongotra Android Fikarohana handeha sy hijery sy ny Dynamic Lane Tari-dalana mba afaka manova ny lalankely soa aman-tsara.
Misy Junction View mba hanasongadinana làlambe fivoahana sy ny fampiharana Mampitandrina anao koa ny nihoatra hafainganam-pandeha sy ny hafainganam-pandeha raikitra Cams.
Ny fampiharana dia mandroso amin'ny fomba mampiseho ihany koa fa polisy fandrika fampitandremana avy amin'ny mpamily hafa. Ny fampiharana dia afaka miantso anarana isaky ny sasin-tenin'ny eny an-dalana ianao mba afaka hifantoka amin'ny an-dalana fa tsy zana-kazo.
Lalana telo samy hafa dia afaka misafidy sy mora Drag & Mitete lalana fanovana.
Raha te-hitsidika toerana manokana, dia manome anao waypoints toerana isan-karazany. Misy sary izay optimisé ho takela-kazo sy ny hafa mampiseho HD. Ny teny fampidirana fiara azo mifandray amin'ny alalan'ny tariby na Bluetooth.
Ahoana ny fametrahana Sygic GPS Navigation Crack?
Esory ny teo aloha sy ny dikan-hamafa ny fampirimana Sygicif
1 (A). Fa Android < 4.4+ Unzip ary mandika Sygic fampirimana ny fototeny fampirimana (anatiny fitehirizana na karatra SD)
1 (B). Fa Android > 4.4+ Unzip ary mandika "Android", "Sarintany", "Res" avy Sygic lahatahiry (base-lahatahiry tahiry) ny Android / antontan-kevitra / com.sygic.aura / antontan-taratasy / ataovy eto Android, Maps, Res (anatiny fitehirizana na karatra SD (mamorona, raha tsy misy)
Ampiasao MapDownloader mba télécharger ny faritra firenena.
Fa Android < 4.4+ Adikao ny sarintany alaina ny lahatahiry SDCard / Sygic / Maps / ~ hametraka sarintany eto ~
3 (A). Fa Android > 4.4+ Adikao ny sarintany alaina ny lahatahiry Android / antontan-kevitra / com.sygic.aura / antontan-taratasy / Maps / ~ hametraka sarintany eto ~
Hametraka nitampintampina apk.
Start App, dinganina mailaka sy Enjoy!